म्यानचेस्टरमा मौसमको मार : दुई दिवसीय खेल बनेको भारत-न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा कसको पल्ला भारी?
नेपाल लाइभ | २०७६ असार २५ बुधबार | Wednesday, July 10, 2019 ११:२५:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- इंग्ल्यान्डमा जारी १२औं विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत पहिलो सेमिफाइनल खेलको बाँकी खेल आज (बुधबार) हुँदैछ।
भारत र न्युजिल्यान्डबीच मंगलबार सुरु भएको खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएपछि बाँकी खेल आज हुन लागेको हो।
न्युजिल्यान्डले ४६ दशमलब १ ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा २ सय ११ रन बनाएर खेलिरहेको अवस्थामा वर्षा भएपछि बाँकी खेल हुन सकेको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसीले) सेमिफाइनल तथा फाइनल खेलका लागि ‘रिजर्भ डे’को व्यवस्था गरेकाले मंगलबारको बाँकी खेल आज हुने भएको हो।
वर्षाको चपेटाका कति खेल?
यसअघि समूह चरणका खेलमा भने ‘रिजर्भ डे’को व्यवस्था गरिएको थिएन। जारी विश्वकपमा ३ वटा खेलमा एक बल पनि बलिङ नभई अंक बाँडिएको थियो। पाकिस्तान र श्रीलंका, बंगलादेश र श्रीलंका तथा भारत र न्युजिल्यान्डबीचका खेलहरु वर्षाका कारण पूर्णरुपमा प्रभावित भएका थिए।
यस्तै, दक्षिण अफ्रिका र वेस्टइन्डिजबीचको खेलमा पनि पहिलो इनिङको ७.३ ओभर मात्रै खेल हुन सकेको थियो। यी दुई टोलीले पनि १/१ अंक बाँडेका थिए। अफगानिस्तान र दक्षिण अफ्रिका, भारत र पाकिस्तान तथा श्रीलंका र अफगानिस्तानबीचको खेलका क्रममा पनि वर्षा भएपछि निर्णय डक वर्थ लेविस नियमबाट लिइएको थियो।
जारी विश्वकपमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी खेलहरु वर्षाका कारण प्रभावित भएका थिए। धेरै खेलहरु प्रभावित बनेपछि समूह चरणका खेलमा पनि रिजर्भ डे नराखेको भन्दै आइसिसीको आलोचना भएको थियो।
आइसिसीले भने प्रतियोगिता अवधि लामो हुने तथा आर्थिक व्ययभार बढी हुने भन्दै सेमिफाइनल तथा फाइनल खेलमा मात्रै रिजर्भ डे राखेको स्पष्ट पारेको छ।
जारी प्रतियोगिता मे ३० देखि जुलाई १४ सम्मका लागि तय भएको छ।
वर्षा भइरहे निर्णय कसरी?
म्यानचेस्टरमा भारत र न्युजिल्यान्डबीचको बाँकी खेल मंगलबार रोकिएकै अवस्थाबाट आज स्थानीय समयअनुसार बिहान १०:३० मा सुरु हुनेछ। मंगलबारको खेल रोकिँदासम्म न्युजिल्यान्डका रोस टेलर ६७ र टम लाथम ३ रनको व्यक्तिगत अवस्थामा अविजित छन्। अब न्युजिल्यान्डले २३ बल खेल्न बाँकी छ।
टस जितेर ब्याटिङ रोजेको न्युजिल्यान्डका लागि कप्तान केन विलियम्सनले ६७ तथा हेनरी निकोलसले २८ रन बनाए। सुस्त गतिमा रन बनाएको न्युजिल्यान्डलाई भारतका बलरहरुले दबाबमा राखेका थिए।
भारतका लागि बलिङ गरेका सबै ५ बलरले समान १/१ विकेट लिएका थिए। युजवेन्द्र चाहल केही महँगो सावित भए पनि अन्य बलरहरुले भने किफायती बलिङ गरेका थिए।
आजको खेलमा मौसमले साथ दिएमा न्युजिल्यान्डले बाँकी २३ बल खेलिसकेपछि भारत जवाफी लक्ष पछ्याउँदै मैदानमा उत्रिनेछ। यदि खेलका क्रममा वर्षा भइरहेमा ओभर छोट्याइनेछ। यदि सोही अवस्थामा पनि वर्षा भइरहेमा बाँकी निर्णय डक वर्थ लेविस नियमका आधारमा लिइनेछ। यसका लागि निर्णय दिन भारतले कम्तिमा २० ओभरको खेल खेलेको हुनुपर्नेछ।
यस्तो स्थिति पनि नबनेमा भारत स्वतः फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। भारत समूह चरणको शीर्ष स्थानमा रहेकोले उ स्वतः शीर्ष २ मा छानिनेछ। आइसिसीको नियमानुसार सेमिफाइनल तथा फाइनल खेलको नतिजा रिजर्भ डेमा पनि निस्कन नसकेमा समूह चरणमा प्राप्त गरेको स्थानका आधारमा टुंगो लाग्नेछ।
मौसमी अवस्था भारतको पक्षमा
पहिलो पटक विश्वकप जित्ने लक्ष लिएको न्युजिल्यान्ड सूमह चरणको खेलमा चौथो स्थानमा रहँदै सेमिफाइनल पुगेको हो। वर्षाका कारण आज पनि खेल हुन नसकेमा न्युजिल्यान्डका लागि त्यो दुर्भाग्य सावित हुनेछ।
म्यानचेस्टरको आजको मौसम मंगलबारको भन्दा पनि खराब रहेको मौसमी रिपोर्टमा बताइएको छ। त्यहाँस्थित मौसम पूर्वानुमान शाखाले आज म्यान्चेस्टरमा मंगलबारभन्दा बढी पानी पर्ने अनुमान गरेको छ।
अहिले पनि सो क्षेत्रमा बादल लागिरहेको र वर्षा भइरहेको शाखाले जनाएको छ। यही अवस्था रहेमा आज पनि बाँकी खेल हुन नसक्ने बताइएको छ।
कोभन्दा को कम?
यस बाहेक पनि जारी विश्वकपमा भारतका खेलाडी लयमा रहेको र सबै 'लाइन अप'मा भारत चुस्त देखिएकोले उसलाई नै प्रतियोगिताको दाबेदारसमेत मानिएको छ। भारतका शीखर धवन र केदार जाधव घाइते हुँदै विश्वकपबाट बाहिरिए पनि कतिपय खेल विश्लेषक तथा पूर्व खेलाडीहरुले भारतले ब्याटिङ, बलिङ तथा फिल्डिङ तीनै क्षेत्रमा सटिक प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै उसको पक्षमा मत दिएका हुन्।
भारतका रोहित शर्मा तथा विराट कोहली ब्याटिङमा चुस्त देखिएका छन्। रोहित जारी विश्वकपका सबैभन्दा बढी रन बनाउने खाेलाडी समेत हुन्। उनले ५ शतक बनाउँदै एकै विश्वकपमा सबैभन्दा बढी शतक बनाउने रेकर्ड समेत राखेका छन्। उनी एकै विश्वकपमा सबैभन्दा बढी रन बनाउने भारतकै पूर्व क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरको रेकर्ड (६ सय ७३ रन) तोड्न मात्र २६ रन टाढा छन्।
यसबाहेक जसप्रित बुमराह, मोहम्मद सामी तथा भुवनेश्वर कुमारकफ बलिङ पनि लयमा छ।
उता न्युजिल्यान्डका केन विलियम्सन तथा रोस टेलरको प्रदर्शन जारी विश्वकपमा उत्कृष्ट रहेको यस खेलमा समेत न्युजिल्यान्ड यीनै दुई ब्याट्सम्यानमाको भरमा मैदान उत्रिने आँकलन गरिएको थियो। सोही आँकलन अनुसार दुवै ब्याट्सम्यान अर्धशतक प्रहार गरेका छन्।
जारी विश्वकपमा ह्याट्रिक गरेका ट्रेन्ट बोल्ट र लुक फर्गुसन (१७ विकेट) न्युजिल्यान्डको बलिङको धार मानिएका छन्। उनीहरुले यस खेलमा आफ्नो लयलाई निरन्तरता दिने अनुमान गरिएको छ। मौसमका कारण पनि आजको खेल हुन सकेमा ब्याट्सम्यानभन्दा बलरलाई खेलमा हाबी हुन सघाउ पुग्नेछ।
(यसअघि यस समाचारको शीर्षकमा भूलवश न्युजिल्यान्डको सट्टा पाकिस्तान हुन गएकोमा सच्याइएको छ- सम्पादक।)